Faahfaahin Masuulin Soomaliland oo Laascaanood lagu toogtey - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandFaahfaahin Masuulin Soomaliland oo Laascaanood lagu toogtey
September 11, 2021 News Puntland, Somaliland, Wararka Khaatumo, Wararka Maanta 1
Wararka Ka imaanaya Magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa sheegaya in magaaladaasi lagu toogtey mid ka mid ah masuulinta Golaha deegaanka Soomaliland ee laascaanood,waxaana toogtey kooxo hubaysan sida goobjoogayaal ku waramayaan.
cabdirisaaq Axmed Cilmi ayaa la sheegay in lagu magacaabayey oo ka mid ahaa masuulinta Golaha Deegaanka Magaalada Laascaanood ee Soomaliland.waxaana uu ka tirsanaa Xisbiga Wadani wakhti uu ku sugnaa irida Hoyga gurigiisa.
Ciidamada Maamulka Soomaliland ayaa bilaabay Howlgalo Ay dadka magaalada ku Xidhxidhayaan iyo kuwa ay sheegeen in looga shakiyey dilkani.
Laascaanood waxaa ka dhaca dilal siyaasadeed iyo Mid beeleed oo dhamaantooda ay gadaal ka rixayso Soomaliland.
Wixii wararka Dib kala soco.
DAAWO VIDEO:Wararkii ugu Danbeeyey Guud Ahaan Khilaafka RW Rooble iyo Madaxweyne Farmaajo
Runtii, waxaa Soomaalida toos u qabatay isla maahmaahdii ay tukaha ku gantay, taas oo udhigmaysa nasiibka ay uyeelatay mandiqad aad u istraatijisan oo kheyraadkeeda aan la qiyaasi karin, haseyeeshee ay calfanba kari wayday qarniyadii ay kunoolayd.
Sidii aan marar badan oo hore ku nuuxnuuxsaday, bal inta aan Soomaalida kaleba la isla gaarin, inteennan geyiyada Woqooyi Bari iyo Woqooyi Galbeed oodwadaagta ku ah waxaannu soli kari waynay inaannu inta xinka iyo xasadka qabaliga ah ee nusqarniga ragaadka iyo rafaadka na baday ka xorowno labadeennan geyi ee qaniga iyo qaaligaba ah kuheshiinno oo kana yagleelanno labo dawlad midaleedyo oo isbarbar yaalla aanse wax xuduudo ahi kadhexeynin habayaraatee.
Waxaannu garan kari waynay in aadmigu sidoodaba baahiyada iyo duruufaha nololeed kasiman yihiin oo una siman yihiin, lagama maarmaanna ay tahay in bina-aadamku iskakaashadaan siyaabaha iyo sifooyinka baahiyada iyo duruufaha inta hadba bogcad wadaagta ku hareereysan oo kuna gadaaman iskaga haqabtiri lahaayeen.
Inteenna labadan geyi ee mataaneysan (Puntland iyo Somaliland) wadaagtana, kheyraad nooc kasta leh ayaannu barkannahay oo dushoodana isku laynnaa leyl iyo nahaarba, waana kheyraad haddii aannu inta hoos u eegno daban lahayn kun jeer iyo ka badanba ina kaafin lahaa oo silaca iyo saxariirta aannu kasimannahayna kaga bixi lahayn.
Qolo kasta oo aannu nahayba, duruufaha iyo baahiyada iskusi ayay inoo wada haystaan oo diifta, dayaca, darxumada, iyo dulligaba iskusi ayay inoo wada saaran yihiin oo inoona wada galaaftaan. Maxaa haddaba naga dhoohay garashada ah in cid kasta qolada ay doonto ama tahayba iska ahaato laakiinse aannu bina-aadam meel ku wada dhaqan ahaan geyiyadeenna u basarisanno oo iimaansanno?
Haddii aannu heer Soomaalinimo iyo heer Islaamnimo isugu damqi waynay oo ugu heshiin waynay, maxaa naga madoobeeyay inaannu heer bina-aadamnimo isku qaddarinno oo iskagana kaashanno in aannu xayaatadan dulliga ah ee ina wada saameysay kaga baxno oo mid kasii fiicanna kubeddelanno?
Dhulka aannu dushiisa isku dooxdooxaynno waxaa kujira kheyraad ay dad badan oo dunida kunool aad ugu taamayaan oo damac weynina ka hayo, annaguna waa annagaa calfanba waynay. Bal yaa naga ayaandaran?!